SUNx Malta Na-achọ Greta Thunbergs maka Njem na Nlegharị Anya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » SUNx Malta Na-achọ Greta Thunbergs maka Njem na Nlegharị Anya
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
SUNx Malta na-arụ ọrụ na-ewu a “Njem Enyi na Enyi na Enyi”Ọdịnihu ~ Low-carbon: SDG-njikọ: Paris 1.5 trajectory. Ebumnuche anyị bụ inyere ụlọ ọrụ na obodo aka ịwulite ihu igwe ha.
Anyị maara na COVID-19 bụ eziokwu siri ike taa, mana anyị kwenyere na Mgbanwe ihu igwe dị adị ga-aka njọ ọtụtụ oge, yana anyị kwesịkwara iji amamihe na echiche kwadebe maka ọdịnihu Ihu Igwe, ebe anyị na-azaghachi ọrịa ahụ.
Dị ka akụkụ nke usoro ihe omume anyị, anyị na-amalite usoro diplọma n'ịntanetị iji zụọ ndị na-eto eto ka ha bụrụ Ndị agbachitere maka njem ndị enyi na ihu igwe, na-enyere aka ịkwado mgbanwe na ụlọ ọrụ na obodo. E mepụtara usoro ọzụzụ a na Malta's Institute of Tourism Studies, na-agba ọsọ maka ọnwa 12, ụfọdụ ndị ndu 25 nke ụwa na-akụzi na mgbanwe ihu igwe na njem nlegharị anya, na obere ego. Dị ka usoro ntanetị, e mepụtara ya iji dabaa ọrụ ndị dị ugbu a, ma wusie ike nhazi.
Prọfesọ Geoffrey Lipman, SUNx Malta Onye isi ala kwuru, sị:
"Anyị na-achọ ndị nwere otu uche dịka Greta Thunberg banyere Mgbanwe Ihu Igwe, yana inwe nkwenye na njem enyi na enyi bụ naanị otu ụzọ mpaghara anyị ga-esi tinye akụkụ ya na New Economy Economy."
Usoro mmeghe na-amalite na October 2020 - Enwere ike ịchọta nkọwa zuru ezu na ndebanye aha ebe a